पूर्व राजा शाह डिस्चार्ज | We Nepali
नेपालको समय: २०:४६ | UK Time: 15:01
पूर्व राजा शाह डिस्चार्ज
२०७१ असोज ६ गते १०:३२
काठमाडौं । हृदयघातपछि अस्पताल भर्ना गरिएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सोमबार बिहान डिस्चार्ज गरिएको छ । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि शाहलाई शुक्रबार राति नर्भिक अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । बिहान ११ बजे उनलाई डिस्चार्ज गरिएको हो । डिस्चार्ज गर्ने बेला परिवारका सदस्य तथ शुभचिन्तकहरुको अस्पतालमा भीड लागेको थियो । पूर्व रानी कोमल, पूर्व युवराज्ञी हिमानीसहितका परिवारका सदस्यहरु शाहलाई लिन अस्पताल पुगेका थिए । रगत प्रवाहमा अवरोध भएको रक्तनली खोल्न नर्भिकका चिकित्सकहरु डा. यादवदेव भट्ट र डा. भारत रावतले शुक्रबार राति एन्जियोप्लास्टी गरेका थिए । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र ६८ वर्षका छन् ।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र ६८ वर्षका छन् ।
अस्पतालमा वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. यादवदेव भट्ट र डा. रावतले तत्कालै एन्जियोप्लास्टी गराएका थिए । त्यसलगत्तै शाहलाई भिआइभी सिसियुमा राखिएको थियो ।
चिकित्कसकहरूका अनुसार केही वर्षदेखि उच्च रक्तचाप पीडित रहेको शाहलाई आर्मीका चिकित्सकहरूले नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका थिए ।
पूर्वराजा शाहलाई अस्पतालमा परिवारका सदस्य र केही भिभिआइपीलाई मात्रै भेट्न दिइएको छ । अस्पतालमा राजा भेट्न आमा रत्न, श्रीमती कोमल, बुहारी हिमानी, छोरी प्रेक्षासमेत पुगेका थिए ।
यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू बाबुराम भट्टराई, सूर्यबहादुर थापा, कीर्तिनिधि विष्टसमेत अस्पताल पुगेका थिए । अस्पतालमा स्वास्थ्यलाभको कामनाका लागि दिनभरजसो जम्मा भएका राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ता एवं शुभेच्छुकको भीड थियो । – See more at: http://wenepali.com/2014/09/1901.html#sthash.qqmZOehi.dpuf